Beesha Caalamka oo waqti u qabatay Doorashada Somaliya iyo farriin ay u dirtay Farmaajo iyo Rooble - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Beesha Caalamka oo waqti u qabatay Doorashada Somaliya iyo farriin ay u dirtay Farmaajo iyo Rooble - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Beesha caalamka ayaa qoraal ay caawa soo saareen ku sheegay inay aad uga walaacsan yihiin dib-u-dhaca kusii socda geedi-socodka doorashada Soomaaliya.
“Inkastoo billowga dhowaan la billaabay doorashada Golaha Shacabka ay ahayd horumar wanaagsan, ayaa haddana jadwalka doorashada wuxuu si aad ah uga dib dhacay waqtigii loogu talagalay, waxaana loo baahan yahay in la dardargeliyo.” ayaa lagu yiri war-saxaafadeed kasoo baxay beesha Caalamka
Waxay ku boorriyeen madaxda heer qaran iyo kuwa Dowlad Goboleedyada iyo hay’adaha daadihiya doorashada inay si dhakhso leh ugu dhaqaaqaan dhameystirka doorasho loo dhan yahay laguna kalsoonaan karo ee Golaha Shacabka ka-hor dhamaadka 2021ka, iyadoo la ixtiraamayo qoondada haweenka ee ugu yaraan 30 boqolkiiiba.
“Waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa maamulka Galmudug in uu soo doorto labada kursi ee harsan si loo dhameystiro geedi-socodka doorashada Aqalka Sare.. Waxaan ugu baaqaynaa labada hogaamiye inay si degdeg ah u fuliyaan qodobbada lagu heshiiyay, oo ay diiradda saaraan arrimaha mudnaanta u leh qaranka, gaar ahaan dhammaystirka geedi-socodka doorashada” ” ayaa ka mid ahayd war-saxaafadeedka Beesha Caalamka.
Previous articleKu-xigeenkii Wakiilka Midowga Afrika oo ka hadlay Go’aanka ay Dowladda Soomaaliya uga ceyrisay Dalka
Next articleMareykanka oo Amar toos ah u diray madaxda Maamul Goboleedyada Soomaaliya